Africa: Mnangagwa, Liberia's George Weah Headline Africa Business Forum - allAfrica.com
Africa: Mnangagwa, Liberia's George Weah Headline Africa Business Forum
Liberia's George Weah and Zimbabwe's Emmerson Mnangagwa (file photo).
Mnangagwa, who took over power last November, has committed himself to reforms including dealing with corruption and revising anti-investment policies such as the country's indigenisation laws.
The Forum's organisers believe the Zimbabwean leader will have a "prime opportunity to tap from Nigeria's experience".
"As the world's third-largest platinum producer and with abundant diamond reserves, significant agricultural resources, and one of the highest adult literacy rates in Africa, Zimbabwe has a lot to offer," the organisers said.
"Having emerged from a long period of economic isolation, Nigeria offers a solid example on which to base discussions on strategic priorities that must be implemented to revive Zimbabwe's economy and put an end to sanctions."
Top Headlines Zimbabwe Governance Liberia